Wasiirka Waxbarashada oo shaaciyay xilliga uu bilaabanayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Waxbarashada oo shaaciyay xilliga uu bilaabanayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare
Wasiirka Waxbarashada oo shaaciyay xilliga uu bilaabanayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay xiliga uu dhacayo Imtixaanka shahadiga ee Dugsi Sarre ee Dalka iyo tirada ardayda u fariisaneysa sanadkan oo ka badan kuwii sanadkii hore u fadhiista Imtixaanka mideysan ee dowladda.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee dalka Mudane Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa sheegay in dhawaan la bilaabi doono qaadista imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka, isagoo ardayda u rajeeyay inay ku guuleystaan imtixaanka.
“Waxaan rabnaa inaan shaacino in Imtixaankii dugsiga sare ee Shahaadiga la qaadi doono 20-ka bisha May ee sanadkan, waana sanadkii sadexaad ee ay qabaneyso Wasaaradda Waxbarashada, waxaana ka qeyb galaya 23,000 (saddex iyo labaatan kun) oo arday, waxaana uu ka bilaabanayaa ilaa iyo afar dowlad goboleed oo kala ah, Jubaland, Koonfurgalbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug, waxaana ardayda u rajeyneynayaa in ay ku guuleystaan imtixaanka” ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee dalka Mudane Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa xusay inay tahay wax lagu farxo in tiro ka badan kuwii sanadkii hore ay sanadkan imtixaanka u fadhiisanayan.
Previous articleTaliyaha ciidanka Asluubta oo ka digay in la dhisto dhulalkii ciidanka
Next articleTaliska ciidamada Nabadgelyada Waddooyinka oo baaq u diray shacabka